Dhageyso: Madaxweyne DF soomaaliya Xasan Sheekh oo sheegay in dalka aysan ka jirin Hay’ado amniga hanan karto. – idalenews.com
Dhageyso: Madaxweyne DF soomaaliya Xasan Sheekh oo sheegay in dalka aysan ka jirin Hay’ado amniga hanan karto.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadlay arimaha ammaanka magaalada Muqdisho, ayaa shacabka reer Muqdisho wuxuu ka codsaday inay muujiyaan dulqaad amni, xilli maalmahan dambe ammaanka Muqdisho uu noqday mid xumaaday.
Shalay kaliya Muqdisho waxaa ka dhacay dilal kala duwan oo loo geystay dad shacab ah iyo askari ciidanka ka tirsan, kuwaasi oo ka dhacay Magaalada Muqdisho, dilalka qaarkood waxaa geystay Askar Dowladda kujira.
Madaxweynaha Soomaliya ayaa tilmaamay in dalka aysan ka jirin Hay’ado amni oo hanan kara ammaanka dalka.
“Magaalada Muqdisho ammaankeeda wuu fiicnaanayaa hadana wuu xumaanaya sababtoo ah waxa ay tahay in dalka aysan ka jirin Hay’ado ammaanka hanan kara”Ayuu yiri Madaxweynaha
Xasan Sheekh Maxamuud oo xalay ka hadlaye xaflad Madaxtooyada Villa Soomaaliya loogu qabtay Ergadii kaqeybgashay shirka ammaanka ee shalay lasoo xiray, ayaa wuxuu sheegay Madaxweynaha Soomaaliya in Dowladda Soomaaliya ay ku dadaalayso xaqiijinta ammaanka dalka, balse shacabka Soomaaliyeed laga doonaye inay muujiyaan dulqaad amni.
In la xaqiijiyo ammaanka guud ee caasimada ayuu sheegay inaysan aheyn wax sahlan, maadaama 22-sano dalkaan uusan ka jirin nidaam Dowladeed, sidoo kalena ay bur-bureen hay’adihii amniga dalka.
Dhageyso: QM oo ka noqotay go’aan ay ka gaartay shaley Soomaaliya.